अन्तिम किल्ला: भूमिगत – धोखा दिन्छ&ह्याक – Android धोखा दिन्छ
अन्तिम किल्ला: भूमिगत – धोखा दिन्छ&ह्याक
महल, the largest community of survivors, खसेको छ.
एक पटक पोस्ट-एपोकलिप्समा आशाको किरण, यसले अब बाँकीको जस्तै भाग्य साझा गर्दछ. अराजकताको बीचमा, बचेकाहरूको सानो समूह बाँझो उजाडस्थानमा भाग्न सफल भयो.
तपाईं यी बचेकाहरूको सेनापति हुनुहुन्छ. जोम्बी भीडबाट भाग्दै गर्दा जुन तपाईंको अन्तिम अभयारण्यलाई पूर्ण रूपमा नष्ट गर्‍यो, तपाईंले जमिनबाट बाहिर निस्केको एउटा अनौठो भवन भेट्नुहुन्छ. आपूर्तिमा कम र थोरै विकल्पहरूको साथ छोडियो, तपाईं यस भवनमा शरण लिने निर्णय गर्नुहुन्छ. त्यसैले यो जोम्बी-संक्रमित संसारमा बाँच्नको लागि तपाइँको अभियान सुरु हुन्छ.
【निर्माण & आफ्नो आश्रय अनुकूलित गर्नुहोस्】
स्याटेलाइट नेक्सस जस्ता धेरै सुविधाहरूको साथ आफ्नो आश्रय विस्तार गर्नुहोस्, पावर जेनरेटरहरू, मिशन नियन्त्रण, आदि. तपाईलाई मनपर्ने तरिकाले आश्रयको लेआउट डिजाइन गर्नुहोस्!
【नायक र बचेकाहरू】
प्रत्येक नायक र बाँचेकाहरूसँग विशेष जीवन कौशल हुन्छ जसले तिनीहरूलाई सर्वनाशमा बाँच्न मद्दत गर्‍यो।. शेफहरूबाट, डाक्टरहरू, र वैज्ञानिकहरूलाई इन्जिनियरहरू, खानी काम गर्नेहरू, र सैनिकहरू, तिनीहरूको सीपलाई प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्न तपाईंमा निर्भर छ!
【टोली संरचना र समन्वय】
नायकहरूको विविध टोली भेला गर्नुहोस्, प्रत्येक आफ्नो अद्वितीय व्यक्तित्व र क्षमता संग. तपाईलाई सबैभन्दा डरलाग्दो परिस्थितिहरू पनि जित्न मद्दत गर्न आफ्नो मनपर्ने टोली संयोजन बनाउनुहोस्.
आश्रय बाहिर यात्रा र बंजर भूमि मा बहुमूल्य स्रोत को लागी मापन.
अगाडि सञ्चालन आधार र स्रोत बिन्दुहरूको रूपमा कार्य गर्न शिविरहरू सेट अप गर्नुहोस्. तर सावधान रहनुहोस्! Zombies कुनै पनि समयमा आक्रमण गर्न सक्छ!
【साथीहरूसँग गठबन्धनहरू स्थापना गर्नुहोस्】
एक्लै लड्न गाह्रो छ, त्यसोभए किन साथीहरूसँग लड्नु हुँदैन? सामेल हुनुहोस् वा एक गठबन्धन सिर्जना गर्नुहोस् र सहयोगीहरूसँग ती कष्टप्रद जोम्बीहरूलाई नष्ट गर्नुहोस्! एकअर्काको निर्माण र प्राविधिक अनुसन्धानलाई गति दिई सहयोगीहरूलाई सहयोग गर्नुहोस्.
यो कुनै पनि तरिकाले जित्ने स्थिति हो! यो अहिले सबै वा केहि छैन! अगाडि जानुहोस्, कमाण्डर, र आफ्नो साहसिक कार्य सुरु गर्नुहोस्!
कोटि: धोखा दिन्छ र ह्याक वा सल्लाहहरू ट्यागहरू: CheatsHack, Fortress, भूमिगत
← Oil Tycoon: Gas Idle Factory Cheats&ह्याक मर्ज काउन्टी – धोखा दिन्छ&ह्याक →
Bubble Breaker-Aim To Win – धोखा दिन्छ&ह्याक
Poppy Play Game : Playtime Huggy Wuggy Cheats&ह्याक
Poor Snake: Can you help it Cheats&ह्याक
Circle Relax: Daily Art Puzzle Cheats&ह्याक
Poppy Playtime Huggy Wuggy – धोखा दिन्छ&ह्याक
One Deck Dungeon – धोखा दिन्छ&ह्याक
Battle Table Tennis – धोखा दिन्छ&ह्याक
Snow Racing: Winter Aqua Park Cheats&ह्याक
Stickman Escape: छनोट कथा – धोखा दिन्छ&ह्याक